Tusaalooyinka Bixitaanka Ujeeddada Soo-Been-Ururka Kaas oo hagaajin doona Heerarka beddelkaada | Martech Zone
Monday, July 20, 2020 Arbacada, Maarso 30, 2022 Ugljesa Djuric
Haddii aad ganacsi leedahay, waad ogtahay in soo bandhigida habab cusub oo wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo sicirka beddelashada ay tahay mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan.
Waxaa laga yaabaa inaadan u arkin sidaas marka hore, laakiin ka bixitaanka-ujeedka pop-up wuxuu noqon karaa xalka saxda ah ee aad raadineyso.
Waa maxay sababta ay sidaas tahay iyo sida ay tahay inaad horay ugu sii isticmaasho? Waxaad ogaan doontaa in ilbiriqsi gudahood.
Maxay Tahay Ka Bixitaan Ku Talo-Qaadasho Ah?
Waxaa jira noocyo badan oo daaqado pop-up ah, laakiin kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan:
Pop-up-ka waqtigiisa la qabtay
Ka bixitaanka ujeeddo-ka-bixid
Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa leh faa'iidooyin u gaar ah, laakiin hadda waxaan sharxi doonaa sababta ka-bax-up-upka u leeyihiin run ahaantii awood weyn si aad ganacsigaaga u gaarsiiso heer guul sare sare.
Ka bixid-ujeedo pop-up waa, sida magaca laftiisu sheegay, daaqadaha soo baxa marka booqdehu rabo inuu ka baxo websaydhka.
Wax yar ka hor inta booqdeyaashu farta ku fiiqin badhanka si ay u xidhaan browserka tab ama daaqadda, daaqadda soo baxday ayaa soo muuqanaysa. Waxay soo bandhigaysaa soo jeedin aan la celin karin oo soo jiidata dareenka booqdaha oo ku dhiirigeliya inay tallaabo qaadaan.
Hawlgalladan soo-baxa waxay ku saleysan yihiin tiknoolajiyad ka bixitaan-caqli-gal ah oo aqoonsan ujeedka ka-bixidda iyo kicinta pop-up.
Maxayse muhiim u yihiin?
Waa muhiim sababtoo ah waxaad u isticmaali kartaa si aad uga hortagto luminta iibsadaha xiga ee iman kara!
Marka la muujiyo dalabyo qiimo leh, dadku waxay bilaabi karaan inay beddelaan maskaxdooda oo dhab ahaantii fuliyaan himilada aad dejisay.
Haddii dalabkaasi uu ku saabsan yahay warar xiiso leh oo ay ka heli karaan ololahaaga iimaylka ama qiimo dhimis iibsi degdeg ah, waxaad isku dayi kartaa oo aad dadka ku qancin kartaa inay aqbalaan.
Dabcan, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo ay tahay inaad fuliso sida:
Naqshadaynta muuqaal ahaan
Nuqul ku hawlan
Si xariif ah ayaa loo soo bandhigay
Oo ay ku jiraan badhanka CTA (wac-ficil)
Tani waxay umuuqan kartaa waxyaabo badan oo laga fekerayo, laakiin waxaan ku tusi doonaa dhowr dhaqan oo ugu fiican oo aad u baahan tahay inaad raacdo oo aad u isticmaasho si waafaqsan websaydhkaaga iyo guud ahaan ganacsigaaga.
Eeg Xog-wareedka: Waa maxay Ujeeddada Bixinta?
Dhaqammada ugu wanaagsan ee ka soo bixitaanka ujeeddada-pop-ups
Si loo fahmo dhaqamada ka bixitaanka ujeedooyinka ka bixitaanka-ka-wanaagsan, waxaan ku eegi doonnaa iyaga oo adeegsanaya tusaalooyin habboon oo ka socda degello internet oo kala duwan oo guuleysta.
Tusaalaha 1: Soo bandhig maadooyin qiimo leh
Bixinta qaybo qiimo leh had iyo jeer waa fikrad wanaagsan. Markaad ogaatid kooxdaada bartilmaameedka ah, waxaad u diyaarin kartaa waxyaabo iyaga xiise u ah.
Kuwaani waxay noqon karaan:
Aad ayay kuugu fududaan doontaa inaad abuurto dalab aan la celin karin ka dib markaad si fiican u baadho danaha dadka aad rabto inaad u beddesho iibsada alaabtaada ama adeeggaaga.
Beddelka, waxay si farxad leh uga tagi lahaayeen xiriirkooda iimaylka sababtoo ah "qiimuhu runtii wuu hooseeyaa".
Ka dib markaad ururiso xiriirada oo aad ku darto liiskaaga dirista, waxaad ku faafin kartaa wacyigelinta calaamadaha oo aad kula xiriiri kartaa macaamiishaada mustaqbalka.
Laakiin ha ilaawin inaad fuliso waxa laga filayo, haddii kale, macaamiishaadu waxay ku dambayn doonaan niyad jab oo dib uma soo laaban doonaan.
U muuji in aaminaadaada ay gebi ahaanba xaq tahay.
Halkan waxaa ku yaal tusaale Jadwalka:
Macnaha guud: Coschedule wuxuu dejiyaa daaqad pop-up ka bixis ah halkaas oo booqdayaashu ku soo ururin karaan waxyaabo qiimo leh. Sida aan arki karno, waxay sidoo kale si xariifnimo leh u xuseen inay bixiyaan jadwal iyo joornaal labadaba, waxaadna u baahan tahay oo kaliya inaad gujiso Hada hadda badhanka si aad u hesho
Design: Naqshad fudud, laakiin leh midabyo dhalaalaya oo soo jiita dareenka. Sawirrada ka sarreeya qoraalka ayaa caddeyn u ah in waxa ku jira ay iyaga sugayaan, taasi waa, xaqiijintooda.
Nuqul: Wadahadalka tooska ah, Kahor intaadan tegin… runti waxay dadka ku riixdaa inay joojiyaan oo ay soo jeestaan ​​kahor intaysan dhab ahaan tegin, taasna waxaa si caqli ku dheehan tahay loogu adeegsadaa barnaamijkan ka bixitaanka-ujeedka ah sidoo kale.
Bixi: Bixinta waxay umuuqataa martiqaad. Oo ay ku jiraan ereyada qorshe iyo qabanqaabiya waxay kaa caawineysaa inaad ku biiriso dalabka oo dhan wax soo saar wanaagsan iyo waqti wax ku ool ah.
Tusaalaha 2: Soo bandhig Demo Live ah
Demo waa hab fiican oo lagula xiriiro booqdayaashaada.
Waxaa laga yaabaa in barnaamijkaagu u muuqdo mid aad u adag waana taas sababta booqdehu u doonayo inuu ka baxo websaydhkaaga.
Haddii aad bixiso adeeg gaar ah, waxaad awoodi doontaa inaad sharraxdo sida ugu fudud ee loo isticmaali karo, maxay yihiin faa'iidooyinka, iyo wixii la mid ah.
Demo toos ah ayaa xitaa ah ikhtiyaar ka sii fiican maxaa yeelay wax walba waxay ku dhacaan waqtiga-dhabta ah iibsadayaasha suurtagalka ah ayaa arki kara dhammaan cusbooneysiinta iyo wararka.
Fiiri sida Zendesk waxay tan ugu adeegsadeen daaqada ka soo bixitaanka ujeedadooda:
Macnaha guud: Maaddaama Zendesk uu yahay softiweerka tigidhada taageerada macaamiisha, pop-up-kan ayaa ah hab fiican oo lagula macaamilo macaamiishooda mustaqbalka lana bilaabo isgaarsiinta.
Design: Cunsurka aadanaha ayaa lagu daray, kaas oo ka caawiya dadka inay ku xirmaan ganacsigaaga.
Bixi: Demo waa dalab weyn maxaa yeelay barnaamijkani wuxuu ballan qaadayaa xal kaa caawin doona socodsiinta ganacsigaaga xitaa si ka wanaagsan. Iyo, tan ugu muhiimsan, ballanqaadkoodu wuxuu bilaabmayaa fulinta isla xilligan, waxaad bilaabeysaa inaad hesho caawimaad isla markiiba.
Nuqul: Nuqulkani wuxuu leeyahay dhawaaq diiran oo qalbi furan kaasoo aad ugu fiican dhisida xiriiro adag oo lala yeesho macaamiisha. Dhinaca kale, haddii aad leedahay bogag kuwaas oo ah hoos dhismaha, uma baahnid inaad sugto inaad dhammaysato si aad u bilawdo helitaanka macaamiisha iyo ka hoggaansanaanta.
Waxaad sidoo kale ku ridi kartaa popup-kaaga soo socda ugu dhaqsaha badan bogagga oo aad bilawdid inaad shidaal siisid iibintaada.
Tusaale 3: sheeg Xamuul Bilaash ah
Rarista bilaashka ah waxay u egtahay weedho sixir ah qof raba inuu kaa iibsado.
Waa inaad ogaataa inaysan dadku jeclayn inay bixiyaan kharash kasta oo dhinac ah. Xitaa waxay ka sii jeclaan lahaayeen wax ka badan inta ay ka bixin lahaayeen lacag dheeri ah rarka.
Haddii aadan yareyn karin kharashka rarka, waxaa fiican inaad ku darto qiime aasaasi ah intii aad gooni u dhigan lahayd dukaankaaga.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad awood u leedahay inaad u fidiso macaamiishaada maraakiib bilaash ah, waa inaad hubaal sameysaa. Iibkaagu wuxuu bilaabi doonaa inuu kordho waqti aad u yar.
Halkan waxaa ku yaal tusaale Brooklinen:
Macnaha guud: Brooklinen waa shirkad iibisa go'yaal, sidaa darteed layaab ma ahan inaan ku aragno qaar ka mid ah gogosha sariirta oo raaxo leh marka laga hadlayo ujeeddada ka bixitaanka.
Design: Asalka cad, farta madow. Laakiin, runti ma wax fudud baa? Waraaqaha ku jira sawirka asalka ah ayaa si hufan u eg. Waxay u eg yihiin qof hadda ka soo kacay sariir raaxo leh. Waxay u egtahay inay isku dayayaan inay nagu sasabtaan inaan soo iibsano xaashiyahan raaxada leh, taas oo runtii ah mid duufsan, gaar ahaan haddii aad horeyba u dareentay daal markii ay soo shaac baxday.
Bixi: Bixinta waa hubaal in ku filan oo ay waxtar badan leedahay.
Nuqul: Ma jiraan ereyo aan loo baahnayn, nuqul nadiif ah oo nadiif ah.
Tusaale 4: U wac dadka si ay ugu qormaan joornaal
Wargeysku waa nooc ka mid ah waxyaabaha qiimaha leh, gaar ahaan haddii aad sameyso mid weyn oo dadka dhab ahaan looga wargalin karo waxyaabaha muhiimka ah oo aanad dareemin in lagu riixayo inay wax kaa iibsadaan.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku xirnaato macaamiishaada.
Ku socodsiinta ololeyaasha wargeysyada waxay ka dhigan tahay inaad la jaanqaadi karto si ay si sax ah u ogaadaan goorta laga filayo macluumaad cusub.
Halkan waa sida GQ fuliyay tan iyaga daaqad soosaarid:
Macnaha guud: GQ waa joornaalka ragga oo ka hadlaya nolosha, moodada, safarada, iyo inbadan.
Design: Haddana, cunsurka aadanaha ayaa lagu daray. Wax yar oo kaftan ah sawirka iyo inta kale ee pop-up waa quruxsan fudud, taas oo ka dhigaysa isku darka weyn.
Bixi: Waxay bixiyaan talooyin iyo tabaha ka caawin kara ragga inay u ekaadaan sida ugu fiican, waxa kaliya ee ay u baahan yihiin waa inay ka baxaan xiriirkooda.
Nuqul: Qaybta ugu muhiimsan ayaa la muujiyey, sidaa darteed booqdayaashu xitaa uma baahna inay wax akhriyaan marka laga reebo qoraalka ku qoran farta ugu weyn, maadaama ay ku siinayso macluumaad ku filan.
Tusaale 5: U samee qiimo dhimis
Qiimo-dhimista marwalba waa dhiirigelin. Markaad ku darto iyaga si looga baxo ujeedooyin pop-up, waxay saameyn weyn ku yeelan karaan dakhligaaga.
Intee ayey sicir-dhimistu noqon doontaa, adiga ayay adiga kugu xidhan tahay. Xitaa dhiirigelin yaryar ayaa si weyn u kordhin kara tirada iibka.
Dukaamada qaar waxay bixiyaan qiimo dhimis joogto ah maxaa yeelay waxay noqotay dhaqan runtii aad u xoog badan.
Xitaa goobaha ugu caansan e-ganacsiga waxay isticmaalaan qiimo dhimis ujeedo ka bixitaan si ay u soo jiitaan dareenka booqdayaasha. Waa kuwan tusaale ka yimid goob aad awooddo ka iibso dharka online, bixintu waa 15% dhimis haddii aad iska diiwaan geliso suuqgeynta iimaylka.
Macnaha guud: Revolve waa websaydh dhar leh xulasho aad u tiro badan oo alaab ah, markaa bixinta qiimo dhimis waxay dadka ku dhiirrigelin kartaa inay wax badan iibsadaan iyadoo ujeedadu tahay in run ahaantii lacag la badbaadiyo.
Design: Waxaan arki karnaa ku darista walxaha bini-aadamka inay tahay wax caam ah sidoo kale. Pop-up-kan wuxuu leeyahay nashqadeyn heer sare ah oo badhanka CTA-ga ka duwan.
Bixi: Waxay bixiyaan qiimo dhimis 10% ah waxayna kaa caawinayaan inaad wakhti yar badbaadiso adoo dooranaya mid ka mid ah saddexda qaybood ee la bixiyo.
Nuqul: Cinwaanka tooska ah waa hab awood leh oo lagu soo jiito dareenka macaamiisha.
Sidaad aragtay, waxaa jira fikrado badan oo ku saabsan sida aad ugu adeegsan karto ka bixitaanka-ujeedka pop-up-ka faa iidadaada iyo inaad kalsooni ku abuurto macaamiishaada.
Waad ku ciyaari kartaa naqshadeynta, nuqul, oo aad ku dari kartaa dalabyo kala duwan oo soo jiidan doona dareenka martidaada isla markaana kordhin doona beddelaaddaada.
Xaqiiqdii waa dadaal yar marka la barbardhigo waxa nooca pop-upku u qaban karo ganacsigaaga.
Rumayso ama ha rumaysan, adeegsiga waxay noqon kartaa xitaa mid fudud maxaa yeelay maanta waxaa jira qalab kaa caawin kara inaad ku abuurto wax-soo-saar wax ku ool ah wax ka yar 5 daqiiqo.
Waxaa jira qalab badan sida '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'Privy iyo' beddeladeeda taasi waxay kaa caawin doontaa inaad abuurto boggag internet kuu gaar ah. Iyadoo tifaftiraha jiita iyo hoos u dhaca iyo xulashooyinka qaabeynta, soo-baxayaasha cajiibka ah waxay diyaar u noqon doonaan hirgelin.
Adeegso dhaqamadaan markaad abuureyso pop-up oo arag midka ugu roon kiiskaaga!
Tags: wicitaan-ku-dhaqaaqguji gujisidheerka beddelkapop-up gelitaankapopup gelitaankaujeedada bixitaankabixitaanka ujeedka pop-uppopup-ka-baxa ahnaqshad pop-updalab pop-upgujisiddalab popuppop-up rogtoGujisid popupwaqti-pop-upsoo shaac baxay
Ugi waa agaasimaha guud iyo aasaasaha Mawduuc wakaaladda suuqgeynta halkaas oo uu ka caawiyo shirkadaha B2B SaaS inay helaan qiimeyn deg deg ah oo Google leh xeelado suuq geyn ah oo awood badan leh. Wuxuu jecel yahay inuu sii kordho SaaS, cabitaanka biirka, inuu la socdo eeyadiisa 2 Dalmatian iyo fardo fuushan.
Jumlad: Tiri, Abuur, oo Ku Habboon Nuqul nuqul AI